Kenya oo wali aan ku guuleysan kursiga UN ee u dhaxeeyey Jabuuti – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kenya oo wali aan ku guuleysan kursiga UN ee u dhaxeeyey Jabuuti
Kenya oo wali aan ku guuleysan kursiga UN ee u dhaxeeyey Jabuuti
Tartanka u dhexeeya Kenya iyo Jabuuti ayaa u gudbi doona wareegga labaad ee codeynta Khamiista ka dib markii wajigii koowaad uu guushu ku raacday magaalada Nairobi oo aan ku filneyn inuu ku guuleysto kursiga Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay.
Wareegii koowaad, Nairobi wuxuu ka dhaliyay 113 cod marka loo eego 78-kii Jabuuti. In kasta oo Kenya ay si adag ugu taagan tahay kursiga wadista, shuruucda doorashada waxay u baahan tahay ugu yaraan saddex-meelood laba meelood tirada xubnaha ka ah Qaramada Midoobay ee u codeeya in lagu dhawaaqo inay guuleysteen.
Arbacadii, doorashadii bilaabatay 4-tii galabnimo waqtiga Kenya waxay aragtay 192 ka mid ah 193-ka dal ee xubnaha ka ah oo codeynaya. Kaliya Venezuela ayaa laga mamnuucay inay codkeeda dhiibato maaddaama ay wali ku jirtey inay xubin ka noqoto UN.
Waxay macnaheedu tahay in diblomaasiyiinta Nairobi ay ku dadaali doonaan sidii ay uga shaqeyn lahaayeen dalal ka mid ah adduunka si ay hal cod oo dheeri ah u helaan si loo arko jabuuti oo diiday go’aankii Midowga Afrika ee ahaa in ay taageerto Kenya oo horay usii waday ololeyaal is barbar socda oo ah kursiga kaliya ee loo qoondeeyay Afrika.
Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay waa hay’adda ugu awoodda badan ee UN, oo loo xil saaray ilaalinta nabadda iyo amniga adduunka. Go’aannadiisa, sharci ahaan, waa inay u hoggaansamaan dhammaan waddamada xubnaha ka ah UNta, iyagoo siinaya sharaf iyo xoog.
Nairobi, haddii ay guuleysato, waxay ka mid noqon doontaa 10 xubnood oo aan joogto ahayn, kuwaas oo inta badan ka garab shaqeeya shanta joogtada ah (Russia, China, UK, US, France) si ay u gudbiyaan qaraarrada taabanaya nabadda iyo amniga adduunka.